RW Rooble oo mar kale hor istaagay damac Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
RW Rooble oo mar kale hor istaagay damac Farmaajo
Maxamed Xuseen Rooble ayaa mar kale maanta Farmaajo ka hor istaagay damiciisii ku aaddanaa inuu galaangal xooggan ku yeesho hoggaanka Guddiga Xallinta Khilaafaadka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa mar kale Kooxda Farmaajo kaga adkaaday loollanka hoggaanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka, kadib markii uu dhawaan hor istaagay in shaqsi Farmaajo ku daaban mar kale hoggaanka u qabto Guddiga Heer Federaal ee FEIT.
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashada heer federeaal ayaa qaab gacan taag ah maanta ugu codeeyay inuu Guddoomiyaha Guddiga noqdo Maxamed Cawil Warsame, kadib markii uu doorashada ka tanaasulay musharaxii xaafiiska Farmaajo gadaal ka rixayay.
18 December 2021, RW Rooble, ayaa shaqada ka raacdeeyay 7 xubnood oo kamid ahaa Gudiga Xalinta Khilaafka kuwaas oo lagu eedeeyay in ay ku milmeen Siyaasadda, isla-markaaana ay dhamaan shaqadii Guddiga hoos geeyeen Farmajo iyo Fahad Yaasiin.
Xubnahaas, waxaa ku jiray guddoomiyihii guddiga, Cali Maxamuud [Seeko], oo hore u baddelay Allaha u naxariistee, C/llaahi Abyan Nuur, oo ahaa gudoomiyaha Gudidga, kaas oo 13 August 2021, ku geeriyooday Caasimadda, taas oo sababtay la sameeyo hoggaan cusub.
Doorashada guddoomiyaha cusub ee guddigaan iyo middii Gudiga Hirgelinta ee lagu doortay Muuse Geelle Yuusuf, waxa ay muujiyen in RW Rooble, dadaal xooggan ku bixiyay in hoggaanka Guddiyadu ka madax-bannaanaadaan fara-galin ka timaadda Farmaajo.
Sida ay sheegayaan dadka siyaasadda u dhuunduleela, in FEIT iyo GXKHDD, ay ka hor wareegaan Maxamed Xasan [Cirro] iyo Cali Maxamuud [Seeko], waxa ay fursad neefin ah u tahay guud ahaan doorasha, gaar ahaan, shaqsiyaadka qaba tabashooyinka.
Guddiga Xallinta Khilaafaadka ee todobada xubnood laga raacdeeyay, waxa ay hore u aqoonsadeen, doorashii boobka ahayd ee 25 November 2021, eedeysane Yaasiin Farey loogu boobay kursiga Hop067, kaas oo degaan doorashiidu tahay Dhuusamareeb.